ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ညောင်စောင်းရွှေသလွန်ထက်က ဆင်းသက်လာလေပြီ”
very nice Mr.Paul
In 1997, r u attend high school? i'm not believe.
Thanks for pointing out. Typo error! It should be 1987. :-) I will correct it in the post. Thanks.
Thanks. Due to my own typo mistake, I felt I was 10 years younger forawhile, ha ha. :-)
ဖတ်ရကျိုးနပ်တဲ့ ပို့စ် ပါရှင်။ ကျမတို့ ငယ် ငယ် ၁၀ တန်းအောင်ပီး အထိ ဘောင်းဘီအရှည် ၀တ်ရင်တောင် အခန့်မသင့်ရင် အလှောင်ခံရပါသေးတယ်။ ဒါ ကျပ်ကျပ်ထုတ်ထုတ် မဟုတ်သေးဘူး ရှင့်။ ရိုးရိုး ဂျင်းဘောင်းဘီ :D
ကိုပေါကို အဖေါ်အချွတ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပို့စ်တင်လောက်အောင် ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုပဲ တွေးနေမိတယ်။
မလေးရည်ရေ.... အခုလို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ အာဖဂန်နစ်စတန်လို တကိုယ်လုံးကို အလုံဖုံးရတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအောက်မှာ ကြီးပြင်းရမှာနဲ့ စာရင်တော့ ကံကောင်းသေးပါတယ်လို့ ကြံဖန်ယူဆရမှာပါ။း-)
အိုဘယ့်...လီယိုနာဒို ဒါကိုဘွိုင်းဇ်.... ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ကြီး တာရှည်နေရင်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဂလိုဘယ်ဝမ်းမင်းခေါ် ကမ္ဘာကြီး တစထက်တစ ပူနွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း လူတွေ အ၀တ်အစားချွေတာတန်သင့်ရင် ချွေတာရတော့မှာမို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ (အဟီး....နောက်တာပါ။)
ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ ကျနော်အစချီလာတဲ့ အားနာခြင်း၊ ယဉ်ကျေးခြင်း၊ အမှန်တရား၊ ရိုင်းပြခြင်း၊ မုသားပြောခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု စတာတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ကျနော်တို့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ့လူအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ ကျနော့်ရဲ့ ငယ်ငယ်ကအတွေးအခေါ်၊ အခုအတွေးအခေါ်တွေအပြင် အခုလောလောဆယ် စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေတဲ့ လက်ရှိအကြောင်းအရာတွေအားလုံးဟာ ကျနော့်ကို စေ့ဆော်တဲ့ အကြောင်းတွေပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စင်္ကာပူရွှေမြို့တော်ကြီးမှာ (ဆရာဒဂုန်တာရာရဲ့ စကားကိုယူသုံးရရင်) ၀တ်လစ်စလစ်အလှနဲ့ အမျိုးသားအမျိုးသမီး စုံတွဲတတွဲ ဗိုလ်ရှုခံထွက်တဲ့သတင်းက အစပေါ့ခင်ဗျာ။ အို.... စုံလို့စုံလို့ပေါ့။
ဒါါဆို များမကြာမီ မောင်ပေါလဲ မဒမ်ပေါနဲ့ ချွတ်ပီးလမ်းသလားတော့မယ်ပေါ့
တချိန်ကျရင်တော့ လျှောက်ဖြစ်ချင်လည်း လျှောက်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ ဘယ်ပြောနိုင်ပါ့မလဲ။ အခုလောလောဆယ်တော့ အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။
Lady Godiva တောင် ကော်ဗင်ထရီ မြို့ထဲမှာ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်နဲ့ မြင်းစီးပြီး ပတ်သေးတာပဲ။ မြို့လူထုကတော့ Lady Godiva ကို လေးစားစိတ်နဲ့ ဘယ်သူမှ တံခါးဖွင့်မကြည့်ပဲ ၀မ်းနည်းစွာ အိမ်ထဲမှာ တိတ်ဆိတ်နေကြသတဲ့။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ “Peeping Tom” လို့ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားမယ့် သတ္တ၀ါကတော့ ချောင်းကြည့်မိလို့ ရာဇ၀င်မှာ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းနဲ့ နာမည်ဆိုးကြီး တွင်ကျန်ခဲ့ရပါလေရော။
အဲဒီအကြောင်းလေးပြောပြပါဦးဗျ။ မကြားဖူးလို့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ နည်နည်းအကျယ်ချဲ့ ပြောပြပါဦး။
ကျနော်လည်း ဆရာတက်တိုးဘာသာပြန်တဲ့ စာအုပ်တခုမှာ သူ့အကြောင်း ဖတ်ဖူးတာပဲ။ (စာအုပ်နာမည်က အတ္ထုပ္ပတ္တိဝတ္ထုတိုများ ထင်ရဲ့။ သေချာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ရှိတဲ့စာအုပ်က မီးထဲပါသွားပြီတဲ့။)
စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ၀ီကီပီဒီးယားလင့်ခ်မှာ သွားဖတ်ပါ။ အတန်အသင့်တော့ ခြုံငုံမိအောင် တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ပို့စ်မှာ ကိုယ့်နာမည်ပါလာတော့ တင်းသွားတယ်ဗျာ (ပဏ္ဍုကဗ္ဗလာကျောက်ဖျာ ကိုပြောတာပါ.. :D)
အလုပ်သွားခါနီး ကမန်းကတန်း ဖတ်သွားပါတယ်။
ညကျမှ မှတ်ချက် ရေးချင်လာရေးပါဦးမယ်။
တော်ပါတော့ ကိုပေါရယ်.. အစိုးရအသစ် တက်ရင် ခင်ဗျားကို ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ခန့်ပါ့မယ်တဲ့... ရပလား..
ဟဲဟဲ။ နောက်ဆုံးတော့ အမြင်မတော်ဘူးပြောတဲ့ ငနဲတွေပဲ ခိုးခိုးကြည့်နေကြတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။
အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်ခံဖို့ ငပေါပြောသမျှ လိုက်နာကြဟေ့..
အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ငပေါဖန်တီးမဲ့ လွတ်လပ်မှူများ
စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဗရမ်းဗတာ လွတ်လပ်ချင်သူများ ငပေါတည်ထောင်မဲ့တိုင်းပြည်ထဲ သွားကြပါဗျို့
ကိုပေါရဲ့ဆိုလိုရင်းကို နားလည်အောင် ကြိုးစားပြီးတော့ ဖတ်ကြည့်ပါ ။
ထုံးစံမဟုတ်တဲ့ ထုံးစံတွေနဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ပြင်ဖို့သင့်နေပါပြီ ။
ထုံးစံတိုင်းက လိုက်နာဖို့မှ အဟုတ်တာ ။
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နှိုင်းပြီး မရိုင်းပါနဲ့ရှင် ။
ကိုပေါ ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ ရှင်သေချာဖတ်ပြီး စဉ်းစားရင် နားလည်လာပါလိမ့်မယ် ။
ရှေးလူကြီးတွေက ပရိယာယ်သုံးပြီး တမင်သက်သက် စီမံဖန်တီး ထားခဲ့တာတော့ ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး။
Sex ကိစ္စကို အလွန်အမင်း တန်ဖိုးထားတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် လောကပါလတရားဖြစ်တဲ့ “ဟီရိ သြတ္တပ္ပ” ကို ရှေးပညာရှိများက ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုမှာ ကိုယ်လိုရာ ဆွဲပြီး ပုံဖော်ခဲ့ဟန် တူပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ခြေသလုံးလေး မပေါ့တပေါ် မြင်ရရုံနဲ့ ဈာန်လျှောရတဲ့ စာချိုးတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ရပ်တန့်မနေပဲ... အမြဲတမ်း အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြောင်းလဲနေတဲ့ အရာဆိုတော့... အရာအားလုံးလည်း ထိုက်သင့်သလို လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲခဲ့... ပြောင်းလဲနေ... ပြောင်းလဲရအုံးမှာပါ။ ယဉ်ကျေးမှုကို ပိတ်ပင်တားဆီးလို့ မရပါဘူး။
အခုပဲ ကျနော်တို့ လက်မခံနိုင်လောက်တဲ့ သီချင်းစာသားတွေ၊ ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုတွေ၊ ဆက်ဆံမှုပုံစံတွေကို လက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရပြီလေ...။
ဒါတွေကို ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက လက်ခံလာတဲ့ တနေ့ကျရင် “ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ် ယဉ်ကျေးမှု” ထွန်းကားသလိုမျိုး ဖြစ်လာအုံးမှာ မလွဲသေခြာပါဘဲ။
တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့ဗျာ... မြတ်ဗုဒ္ဓ ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို စကားလုံးတွေနဲ့ ဝေ့ဝိုက်မနေကြဘဲ... လက်တွေ့ အပြုအမူနဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ လုပ်ဖို့တော့ လိုအပ်တာပေါ့။
ဒါနဲ့ ဦးအောင်ခင်ရဲ့ လေလှိုင်းထဲက စာအုပ်စင် ကို တစုတစည်းထဲ ဖတ်ရှုခွင့် ရတဲ့အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပါ။ ဦးမောင်မောင်ကြီးရဲ့ စာအုပ်ကလည်း ဈေးကြီးလှတာမို့ မဝယ်နိုင်သေးပါဘူး။ လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကိုပေါရေ - ဘလော့ခ်လောကကြီးကို ပြန်ရောက်ရင်း ကိုပေါဘလော့ခ်ဘက် စာလာဖတ်ဖြစ်တယ်။ မဒမ်ပေါက ကိုပေါသဘောကျတတ်တဲ့ ခပ်ချောချော ကောင်မလေးတွေမြင်ရင် လက်တို့ပြောတယ်ဆိုတာ တော်တော်လေး စိတ်ထားရင့်ကျက်ပါပေတယ်။ ကျွန်မဆိုရင်တော့ အဲဒီလိုမရဘူး။ မဒမ်ပေါဆီမှာ အဲဒီလောက်ထိ စိတ်ထားနိုင်ဖို့ လာသင်ဦးမယ် :P
u called those ppl barbarian. so u r the cultured one. haha..
cultural imperialism, isn't?
သင်စရာ မလိုပါဘူးကွယ်၊ ကိုနိုင်မိုးအောင် ကိုပေါခန္ဓာကိုယ်လောက် ဖြစ်လာတဲ့အခါ ညီမလဲ မဒမ်ပေါလို စိတ်ထားရင့်ကျက်လာမှာပါ (ဟဲဟဲ)
Come to Thailand. Thai ladies are good in scantly dress and most of them are fabulous.